Taphattoota filatamoo torban kanaa - BBC News Afaan Oromoo
Tapha Piriimer Liigii torban kanaa leenjisaan Arsenaal Arsen Vinger yeroo dhumaatiif gara Ooldi Tiraafoordi itti deemaniifi Kiristaal Palaas kilaba bara dheengaddaa shaampiyoonaa ture Leesteriin 5 fi 0 mo'ateen Gaarez Kiruuksi taphatoota ciccimoo 11 garee tokko ijaaru jedhu filateera.
Goolii kan eegu
Been Fooster (Westihaamirraa)
Cimana Westihaam erga dhiyeenya kanaa agarsiisaa jiraniif goolii eegaan kilabichaa Been Fooster gahee guddaa gumaachaa jira. Taphataan Niwukasil Diwaayit Geeyil gara gooliitti kan haleele attamitti akka inni qolate hin beeku jedha Garez Kiruuksi.
Galataa Been Foosteriif malee Westbiroomitti taphoota 13 keessaa si'a lamaaf osoo gooliin itti hin lakkaa'amiin xumuraniiru.
Waardiifi Aanholti (Kiristaal Palaasirraa), Abzulkeetaa (Chalsiirraa), Dowusan (Westibiroomirraa)
Dandeettii Joowel Waardi Kgareensaa Kiristaal Palaas Leester waliin taasiseen agarsiise ajaa'iba ture. Kanaafidha taphata filatamaa 11 torba kanaa keessa kanan galchuuf dirqame jedha Kiruuksi. Haaluma walfakkaatuun taphataan gareesaa biroo Paatiriik Vaan Aanholti Leesteroonni gara gooliitti akka hin dhiyaanne gochuuf waan danda'u hunda gchaa tureera. Kanaafis Kiristaal Palaasirratti gooliin osoo hin lakkaa'amiin xumuraniiru.
Abzulkeetaan ga'hee Chelsii keessatti qabu guddaa ta'uu isaa ammallee agarsiisaa jira. Kubbaawwan inni morkatoota jala deemaa irraa buusu ajaa'iba turan. Chalsiif barri dorgommii kun hedduu kan jajamu ta'uu baatus Abzulkeetaan garuu cimana gaarii agarsiisaa jira.
Westbiroomirraa Kereeg Dowusan torban kana keessa toora warra cimina agrsiisan keessatti ramadameera.
Fernaandinihoo (Siitiirraa), Idiriis Gaanaa, (Evertenirraa), Ruuben Looftes (Kiristaal Palaasirraa)
Maanchester Siitiirraa Fernaandiinihoon waan gochuun irraa eegamu mara gochaa jira.
Idiris Gaanaa evertenirraa garee ciccimoo 11 keessa galuudhaaf isa jalqabaadha.Gooli tokko lkoofisuu cinaatti sarara ittisaarraa deemee hojjiin hojjetu baayyee cimaadha.
Ruuben Looftes Chiik dandeettii Kiristaal palaasiif amma agrsiisaa jiru kanaan itti fufnaan garee Ingliiz waliin waancaa addunyaaf gara Raashiyaa ni deema jedheen yaada.
Sarara fuula duraa
Duusaan Taadich (Saawuuzhampieen), Isterliingi (Maanchester Siitiirraa), Zahaa (Kiristaal Palaasirraa)
Goolii erga waggaa tokkootii asitti kan jalqabaa kan lakkoofsise Duusaan Taadichi warra Saawuuzhaampien tapha torban darbee kanaan taphataa kamiyyu caalaa carraa gaarii uumeera.
Isteerlingiis hanga ammaatti bara kana goolii 23 lakkoofsisuun yaalii itti hin fayyadamiin hafe osoo dabalatee ammoo hanga ammaa goolii 40 lakkoofsisuu danda'a ture. Kubbaa sadan inni mijeessee kennes cimina taphataa kanaa mulliseera.
Wilfireed Zahaa tapha Leester waliin tureen humna addaa uffatee ture. Zahaan cinimna isaa kana qabatee akka itti fufu gorsuun barbaadas jedhe Kiruuksi.